Akụkọ - Ọdịmma mmepe nke onye nrụpụta plastik
Nkọwa PVC Plastic, Line Production Board Skirting
Ịkwanyere Pipe Production Line
Nhazi Production Line
Single ịghasa Plastic Extruder
Osisi Plastic Production Line
Ịkwanyere, Pee, PP osisi Plastic Profile Prodution Line
Ịkwanyere Plastic Osisi oghere oghere Production Production Line
Stabilizer nke Dabere na Otu Pack
Calcium Zinc Dabere na otu ngwugwu nkwụnye
Ọganihu mmepe nke ihe mkpuchi plastik
Plastic extruder mgbe ihe karịrị 100 afọ nke mmepe, ewepụtara na mbụ otu ịghasa abụọ ịghasa, multi ịghasa, ọbụna dịghị ịghasa na ndị ọzọ ụdị. Plastic extruder (isi igwe) nwere ike dakọtara na dị iche iche plastic ịkpụzi inyeaka igwe dị ka anwụrụ , ihe nkiri, ihe na-ejide, otu filament, filament dị larịị, eriri mbukota, ụgbụpụta ihe, efere (mpempe akwụkwọ), profaịlụ pụrụ iche, granulation, ihe mkpuchi eriri, wdg, iji mepụta ahịrị mmepụta plastik dị iche iche wee mepụta ụdị plastik niile. ngwaahịa.
Usoro mmepe nke ihe mkpuchi plastik
1. Onye na-apụnara mmadụ ihe na-etolite na ntụzịaka nke nnukwu, oke ọsọ na arụmọrụ dị elu
Ndị na-ebubata ihe si mba ọzọ nwere dayameta nke 200-250mm bụ ihe a na-ahụkarị, na ihe nrụpụta pụrụ iche nwere dayameta nke karịrị 400mm abụghị ihe a na-ahụkarị. Mgbe okpukpu abụọ nke ịghasa okpukpu abụọ, ike mmepụta nke extruder nwere ike ịba ụba ọtụtụ oge.
Ndị na-agba ọsọ dị elu na ndị na-agba oke ọsọ nke ọsọ ya karịrị 300r/min na-apụta na mba ofesi, nke na-eme ka ikike nrụpụta nke ndị na-ebubata ihe dị mma. , dị ka ụdị nkewa, ụdị agwakọta, ụdị ihe mgbochi, ụdị ntụgharị, ụdị nchikota na ihe ndị ọzọ. Ogologo nke dayameta nke ịghasa mekwara site na 20: 1 ruo 36: 1, ụfọdụ dị elu dị ka 43: 1.
2. Ime mgbanwe
Ewelitela ngwa inyeaka nke onye na -apụnara mmadụ ihe ma tozuo oke iji mezuo ihe achọrọ nke ngwaahịa plastik dị iche iche. ; Mmepụta pụrụ iche nwere ike ịhazi akụkụ modul sistemu nke akụrụngwa ịkpụpụta extrusion maka nrụpụta ebe a kapịrị ọnụ ma ọ bụ ọbụna ị nweta ụwa, nke bara ezigbo uru iji hụ na ịdị mma nke oge niile, belata ọnụ ahịa ma mee ka ntụgharị isi obodo dị ngwa.
3. Ndị nwere ọgụgụ isi na netwọkụ
A na -eji extruder nke mba mepere emepe teknụzụ teknụzụ kọmputa na kọmpụta ọgbara ọhụrụ ugbu a, usoro nke usoro mwepụ dị ka mgbaze agbaze na ọnọdụ okpomọkụ, paragraf ahụ anụ ahụ, isi kposara na ngwa ịghasa ngwa ngwa, ọnụego ndepụta nke ụdị niile. nke akụrụngwa, dị ka voltaji dị ugbu a nke nnwale moto na-anwale n'ịntanetị, yana na-eji microcomputer mechiri emechi akara.Some ụlọ ọrụ anabatala nlele anya ntanetị, nyocha na njikwa, wee rụọ njikwa netwọkụ na ahịrị mmepụta extrusion.This dị nnọọ bara uru iji hụ na nkwụsi ike nke ọnọdụ teknụzụ ma melite nkenke ngwaahịa.
Iji mezuo ihe achọrọ maka ihe ọhụrụ na usoro ọhụụ, ndị nrụpụta ọhụụ ma ọ bụ pụrụ iche na -apụta mgbe niile.
Gịnị bụ atụmanya nke ụlọ ọrụ plastik extruder?
Ebe ọ bụ na ngwaahịa ndị na -ebubata ihe nke China nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ ọhụrụ, yana uru nke arụmọrụ dị elu, ịchekwa ike na arụmọrụ ọnụ ahịa dị elu, mbupụ na mba ndị mepere emepe bụ ọkachasị n'etiti etiti na obere njedebe, akụkụ a nke ihe ndị ahịa chọrọ siri ike. Ụlọ ọrụ igwe ga -enwe atụmanya ahịa sara mbara. N'otu oge ahụ, ọ dịkwa anyị mkpa ileba anya n'ihe ịma aka anyị na -eche ihu!
Oge ezipụ: Apr-02-2021
Adreesị: Luoshen Road, Hongming Village, Luoshe, Wuxi, Jiangsu, China
Plastic ígwè extruder ụlọ ọrụ ka ...
Kedu njirimara na ngwa ...
Line Wepụ profaịlụ Wpc, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Na -akụpịa igwe ihe, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Nweta Wpc, Onye Wpc Extruder,